by Japanese writer | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > by Japanese writer
खाना पकाउन गाह्रो हुन सक्छ। काममा लामो दिन पछि, कोही पनि भाँडा र भान्छामा श्रम गर्न चाहँदैन। धन्यबाद, अद्भुत जापानी ईन्स्ट्याण्ट फूड मार्केट तपाईंको उद्धारमा आउन सक्छ! यहाँ जहाँ आधा प्रसिद्ध आधा कुख्यात रामेन नूडल्स आए! तर, यदि तपाईले रामेन पर्याप्त खानु भएको छ भने, यहाँ केहि अन्य इन्स्ट्याण्ट जापानी खाना पनि छन्, जुन स्वस्थ…